? Firy taona ny soavaly velona? | Noti Soavaly
Firy taona ny soavaly iray?
Carlos Garrido | | Fahasalamana sy fikarakarana
Ny famaritana ny taona mety hahaveloman-tsoavaly dia miankina amin'ny lafin-javatra maro toy ny karazany, ny fikarakarana ary ny fanjakana iainany ary koa ny fiainany. Noho izany ny androm-piainan'ny soavaly dia miovaova, afaka miaina eo amin'ny 25 ka hatramin'ny 40 taona.
Na ahoana na ahoana, raha te hanana hevitra azonao raisina a soavaly olon-dehibe rehefa feno efa-taona izy ny fiainana. Avy eo dia tsy maintsy raisina fa ny soavaly babo dia velona lava kokoa noho ny an'ny soavaly satria tsy mitovy ny fepetra sy ny fikarakarana, noho izany dia tsy mihoatra ny 25 taona ny fiainana.
1 Ny androm-piainan'ny soavaly
2 Fiainana an-taonany maro arakaraka ny firazanany
3 Ilay soavaly tranainy indrindra eto an-tany
4 Torohevitra hanitarana ny ain'ny soavaly
Ny androm-piainan'ny soavaly
Mba hahazoana hevitra dia afaka milaza isika fa azo sokajiana ho karazana soavaly telo izy ireo, ary samy manana ny fiainana samy hafa mihevitra hatrany ny toe-pahasalamany sy ny fahasalaman'izy ireo.
Raha miresaka isika soavaly mavesatra heverina ho drafitraIreo dia tsy mitovy amin'ny ambiny amin'ny habeany lehibe, refesina eo anelanelan'ny 1.63 sy 1.68 metatra ary mety milanja hatramin'ny 1.000 kilao, amin'ireny tranga ireny dia eo anelanelan'ny 25 sy 30 taona ny androm-piainana.
ny soavaly maivana na lasely Ny haavony dia mahatratra eo anelanelan'ny 1,42 sy 1,63 metatra ary ny lanjany, 550 kilao, miavaka noho ny hafainganana, ny fanoherana ary ny fahamailoana. Na izany aza, ny fepetra izay mahatonga ireo biby ireo amin'ny sokajy misy ny fiainana ambany indrindra amin'izy telo, na dia mendrika foana aza ny zavatra iray dia ny androm-piainana ary ny iray hafa dia ny fiainana fiasan'ny Equine, noho izany dia manodidina ny 25 taona izy ireo.
Iray amin'ireo soavaly izay ho ela velona ny soavaly. Na dia tsy mihoatra ny iray metatra sy sasany aza ity karazany ity dia manana vatana matanjaka be izy io izay mahatonga azy io ho iray amin'ny karazany lava indrindra. Milamina ny toetrany ary mihoatra ny 40 taona ny androm-piainany, mahatratra 45 aza.
Fiainana an-taonany maro arakaraka ny firazanany
Ankoatry ny anton-javatra toy ny sakafo, ny fomba fiainana ary ny toeram-ponenana, ny fototarazo koa dia mitana andraikitra lehibe kokoa amin'ny faharetan'ny Equine. Miankina amin'ny hazakaza-taniny, ny ho avy dia hampanantena fiainana lava kokoa, na ny mifanohitra amin'izay, fohy kokoa.
Ny karazana soavaly manana ny voninahitra ratsy amin'ny fiainana amin'ny fotoana fohy dia soavaly. Akhal-Teke, ny Altai ary ny Mustang. Ny biby rehetra ao amin'ireto vondrona telo ireto dia mazàna manana fe-potoana iainana eo anelanelan'ny 18 sy 20 taona.
Manaraka azy ireo ny karazana soavaly malaza sy malaza indrindra eran'izao tontolo izao, izay soa ihany fa nanitatra ny androm-piainana taona vitsivitsy. Isan'ireo rehetra ireo dia nasongadinay izao manaraka izao: ny soavaly Arabo, ny Percheron, ny Espaniola purebred, ny Frisian, ny Berber, sns. izany no mametraka ny androm-piainany faratampony amin'ny 25-27 taona, na dia misy fotoana aza mahatratra ny 30 taona.
Araka ny efa noresahina tetsy aloha, ny soavaly pony dia ireo manana tombony lehibe ho iray amin'ireo karazana soavaly manana androm-piainana lava indrindra (35-40 taona eo ho eo). Izy no miaraka amin'ilay soavaly malaza Criollo, izay afaka, toy ny soavaly, manitatra ny fisiany hatramin'ny 40 taona.
Ilay soavaly tranainy indrindra eto an-tany
Toy ny mahazatra any amin'ny faritra maro, dia misy tranga na fisehoan-javatra izay manaparitaka ny fenitry ny mahazatra, ary lasa tranga miavaka tokoa.
Ny iray tamin'izy ireo dia ilay soavaly 'Shayne'. Ity biby ity, sorrel Thoroughbred nipetraka tao Essex (Great Britain), nahavita niaritra teto amin'ity tontolo ity hatramin'ny faha-51 taonany izy, izay no antony inoana fa izy no soavaly tranainy indrindra izay hita.
Mihevitra ny mpiambina azy fa ny tsiambaratelon'ny androm-piainan'ity soavaly ity dia nizara mitovy ny toetrany, ary ny tompony rehetra dia efa nikarakara tsara azy io.
Torohevitra hanitarana ny ain'ny soavaly
Raha ny marina dia tsy misy fitaka marina izay hampijanona ny soavaly miaraka amintsika mandritra ny fotoana lava kokoa, satria mety hisy toe-javatra tsy misy farany izay miafara amin'ny vokatra mahafaty. Na izany aza, raha mampiditra andian-toro-hevitra ampiharina isika, dia afaka mandray anjara amin'ny fanantenana kely kokoa amin'ny fiainana, na farafaharatsiny manana kalitao avo kokoa.
Voalohany indrindra tsy maintsy apetraka manokana ny sakafo mahavelona. Ny sakafo marina sy ny sakafo voalanjalanja dia hanafaka ny soavaly amin'ny aretina maro ary tsy hijanona ho salama sy hatanjaka.
Antony iray lehibe hafa koa ny fahadiovana. Ny fitazonana ny tranon-tsoavaly sy ny toerana matetika alehan'ny soavaly mba hadio mandritra ny fotoana maharitra dia hisorohana azy ireo tsy ho loharanon'ny aretina sy loza.
Raha ampanaovintsika asa mafy ny soavalintsika (asa mavesatra amin'ny fitifirana, famoahana sns), dia hanasazy azy tafahoatra isika, zavatra izay tsy maintsy hialana amin'ny vidiny rehetra raha tsy tiantsika hisy akony ratsy.
Amin'ny ankapobeny, ireto no torohevitra fototra ahafahana miaina ny soavalintsika amin'ny herintaona, na dia tsy izy ireo ihany izany: fanatanjahan-tena isan'andro sy ny fitsidihana tsy tapaka ny dokotera afaka manampy be dia be koa izy ireo.
Fifandraisana eo amin'ny taona niainan'ny soavaly sy ny taonan'ny olombelona
Raha te hanana fifandraisana na parallisme izay ahafahantsika mahafantatra isika hoe ohatrinona ny taonan'ny soavaly ampitahaina amin'ny an'ny olona iray, dia tsy maintsy fantarintsika izany, na mihoatra izany, herintaona amin'ny soavaly (rehefa nihoatra ny efa-taona ny biby) dia mitovy amin'ny roa taona sy sasany an'ny olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Fahasalamana sy fikarakarana » Firy taona ny soavaly iray?
Patricia dia hoy izy:
Salama, misaotra betsaka, tena nilaina ity info ity.
Te-hahazo vaovao amin'ny mailako aho isaky ny mamoaka izy ireo.
Valiny tamin'i Patricia
Ny soavaly lehibe indrindra eto an-tany